सांसद गङ्गा चौधरी भन्छिन – `मलाई माफि माग्नु पर्छ भन्नेहरुले नै, मेरो देशसंग माफि माग्नु पर्छ´ – Butwal Sandesh
सांसद गङ्गा चौधरी भन्छिन – `मलाई माफि माग्नु पर्छ भन्नेहरुले नै, मेरो देशसंग माफि माग्नु पर्छ´
पछिल्लो समय नेपालको संसद भवनमा राष्ट्रियाताको विषयलाई लिएर सांसदहरुबीच निकै नै च,र्काचर्की भएको छ । नेकपा सांसद गंगा चौधरी र संघिय समाजबादीकी सांसद सरिता गिरीबीचको वि,वाद यतिखेर उत्कर्षमा पुगेको छ ।
जेठ १९ गते प्रतिनीधि सभा बैठकको शुन्य समयमा बोल्दै सांसद चौधरीले संसदमा भारतीय चेलीको दा*दागीरी बढ्दै गईरहेको बताएकी थिईन् । उनको अभिव्यक्तिमा आ,पत्ति जनाउँदै भारतीय चेलीको उपनाम पाएकी सांसद गिरीले सांसद चौधरीलाई गैर जिम्मेवारपुर्ण अभिव्यक्ति दिएकोमा माफि माग्नु पर्ने सभामुखसंग माग गरेकी थिईन् ।
साथै उनले भारतीय चेली नेपालको कानुन अनुसार नै संसदमा आएको पनि बताएकी थिईन् । सांसद गिरीसंगै संसद भवनमा अर्की सांसद अमृतादेवी अग्रहरीले पनि भारतीय चेली भनिएको विषयमा रो,स प्रकट गरेकी थिईन् । सांसद चौधरीलाई माफि मगाईनु पर्छ भन्ने सांसद गिरीको अभिव्यक्तिले नै पछिल्लो समय मिडिया तताएको छ । र यो एउटा बहसको विषय नै बन्न पुगेको छ ।
यस विषयमा देश विदेशमा रहेका नेपाली जनताहरुले सांसद चौधरीको समर्थनमा आफ्ना सकारात्मक धारणाहरु पनि सार्वजनिक गरिरहेका छन् । यसै विषयमा ताजाखबरले सांसद गंगा चौधरीसंग कुराकानी गरेको छ । २०४९ सालदेखि सुदुरपश्चिमको कैलालीबाट राजनीतिक यात्रा शुरु गरेकी उनै सांसद चौधरीसंग गरिएको कुराकानीको केही अंश:
पछिल्लो समय तपाँई ‘भारतीय चेलीको संसदमा दा*दागीरी’ भन्ने अभिव्यक्तिबाट निकै नै चर्चा कमाई रहनु भएको छ । तपाँईको समर्थनमा सबै नेपालीहरुले आ–आफ्नो धारणाहरु पस्कि रहेका छन् । कस्तो महसुस गर्दै हुनुहुन्छ ?
आज बल्ल मैले आफ्नो राष्ट्रकोलागी लड्दैछु भन्ने महसुस गरिरहेको छु । गर्वको महसुस गरिरहेको छु । मैले, मेरो अभिव्यक्तिमा आएका प्रतिकृयाहरुलाई हेरिरहेको छु । ती प्रतिकृयाहरुमा सबैले मेरो भनाईप्रति आफ्ना सकारात्मक विचारहरु दिई रहनु भएको छ ।
यसबाट म के बुझ्छु भने मैले सबै नेपालीको मनको कुरा बोलेको रहेछु । मलाई कुनै एउटा नेपालीले गा,ली गरेको वा यस्तो अभिव्यक्ति नदिएको भए हुन्थ्यो गंगाले भनेर भनेको देखाई दिनुस् अनि विचार गरुँला । जब मलाई कुनै पनि नेपाली जनताले संसदिय मर्यादा भन्दा पर गएर बोल्यो गंगाले भनेर भन्नु भएको छैन । भने म किन गर्व नर्गनु ?
कमसेकम नेपाली जनताको हीतमा, देशको सार्वभौम सत्ता र अखण्डताको पक्षमा, संसदको मान मर्यादामा आँच नआउने गरेर मैले बोलेके कुरामा म मात्रै नभई सबै नेपाली जनताले गर्व गर्नुपर्छ । मैले पनि त्यही नै महसुस गरिरहेको छु ।
तपाँईले नाम किटान गर्दै ‘भारतीय चेलीको दा*दागीरी’ भनेर संसदमा दिएको अभिव्यक्तिप्रति संघिय समाजबादी दल भित्र निकै नै खैलाबैली मच्चिएको छ नी । त्यसको नतिजा त आज संसदमा तपाँईले देखि नै हाल्नु भयो । यो विषयमा के भन्नु हुन्छ ?
मलाई राम्रोसंग थाहा छ, जेठ १९ गते हाउसमा बोल्दा मैले कसैको पनि नाम लिएको छैन । त्यसैले मेरो अभिव्यक्तिप्रति कसैले चर्को स्वर पारेर कराउन आवश्यक नै देख्दिन । जस्लाई खसखस परेको छ र जो बिना अर्थमै उफ्रि रहनु भएको छ त्यसले त्यो दिनको रेकर्ड हेरेर बोलोस् ।
संसदमा नाम उच्चारण गरेर टिकाटिप्पणी गर्न मिल्छ या मिल्दैन भन्ने कुरा मलाई पनि राम्रोसंग थाहा छ । यो विषयमा कुनै एक सांसदले अर्को सांसदलाई सिकाउन जरुरी नै छैन । रह्यो कुरा ‘भारतीय चेलीको दा*दागीरी’ भन्ने । यो कुनै आ*पत्तिजनक भनाई नै हैन । जस्मा यत्ति धेरै आ*पत्ति जनाईएको छ । जो जाहाँबाट आउँछ उस्लाई त्यही ठाउँको नामले सम्बोधन गरेर मैले बोलेको छु । अब बाँकी रह्यो दा*दागीरीको कुरा त्यो त मैले दोहोराई तेहेराई केही भन्न आवश्यक छ र ? सबै नेपाली जनताले जाने बुझेकै कुरा हो ।
यदि उहाँले आफुलाई नेपाली भन ठान्नु हुन्छ भने सबै नेपाली जनताको तर्फबाट मेरो प्रश्न छ उहाँ भारतीय चेलीलाई कि, आफ्नो देशको नक्सा सार्वजनिक गर्नकोलागी किन छिमेकीसंग सोध्नु पर्ने हामीले ? के उहाँको माईती देशले हामीलाई सोधेको थियो र ? लिपुलेकमा सडक बनाउनु पुर्व ? कस्तो दा*दागीरी ? उद्घाटन गरिसकेपछि हामीलाई थाहा भयो ।
के त्यतिबेला उहाँको माईती देशकाले हामीलाई, हामी तपाँईको जमीनमा सडक बनाउँदै छौं, तपाँईहरुको राय के छ भनेर सोधेका थिए र ? भारतीय चेली भन्दा पि,र मान्नेले यदि उहाँलाई साँच्चिकै ससुराली देशको चि,न्ता हुन्थ्यो भने उहाँले पहिले आफ्नो माईती देशका प्रधानमन्त्रीलाई सोध्नु पथ्र्यो, कि, किन मेरो ससुराली देशको सिमा मिचेर सडक बनायौ भनेर ? आफ्नो माईती देशले सही नसक्नु दा*दागीरी गरी रहंदा उहाँले केही नबोल्ने । बोले पनि उतैको पक्षमा बोल्ने । अनि यस्लाई उहाँहरुको दा*दागीरी नभनेर के भन्ने त ?
सांसद गिरीले त तपाँईलाई संसदिय मान मर्यादालाई कुल्चदैं बोलेको भन्ने आ*रोप लगाएर सार्वजनिक माफि माग्नु पर्छ भन्दै सभामुखसंग माग राख्नु भयो नी । माफि माग्नु हुन्छ त ?
केको लागी माफि ? कोसंग माफि ? कस्तो माफि ? माफि मैले हैन जस्ले माफिको कुरा गरेको छ नि उसैले माग्नु पर्छ माफि संसदको अगाडी । ३ करोड जनताको अगाडी । उहाँहरु आफैं नै राष्ट्रको हीत नहुने अभिव्यक्ति दिने, सार्वभौमसत्ता र अखण्डताको विरुद्धमा बोल्ने, उहाँहरुले नै संसदमा खुलेआम दा*दागीरी मच्चाउँँदै मरो देशको विरुद्धमा बोल्ने, त्यस्तो व्यक्तिले माफि माग्ने कि मैले माग्ने ?
तपाँईकै यो ताजाखबरबाट म भन्छु यो माफिको विषयमा म संसदमा पक्कै बोल्ने थिएँ । तर म सत्ता पक्षको सांसद हुँ । त्यसैले किन दोहोरी खेल्ने भनेर म चुप लागें । यसको अर्थ कदाचित यो होईन कि मेरो लागी बोल्ने अरु कुनै प्लेटफर्म नै छैन ।
तपाँईकै यो मिडियाबाट भन्न चाहान्छु , माफि मैले हैन जस्ले मलाई माग्नु पर्छ भनेका छन् उनीहरुले नै माफि माग्नु पर्छ नेपाल आमासंग माफि । उनीहरु नै झुक्नु पर्छ मेरो देशको सामुन्ने । मेरो राष्ट्रियताको सामुन्ने ।
बिहे गरेर आएको चेलीले जबसम्म त्यो घरलाई आफ्नो घर मान्दैन नि, तबसम्म उस्ले न त्यो घर बनाउँछ, न अरुलाई नै बन्न दिन्छ । संसदमा दा*दागीरी मच्चाउने भारतीय चेलीहरु त्यही क्याटागोरीमा पर्छन् । त्यसैले त्यस्तालाई खबरदारी गर्नकालागी म जस्ता धर्ती पुत्रीहरु अझैं जिउँदै छौं ।
भारतीय चेलीहरुले दा*दागीरी मच्चाए भन्ने तपाँईको अभिव्यक्तिलाई सापटि लिएर भन्ने हो भने कुन कुन कुरामा उनीहरुले दा*दागीरी मच्चाए ? यो विषयमा अलि प्रष्ट पारिदिनु हुन्छ कि ?
यो विषयमा त तपाँईले पनि सुनिसक्नु भएको छ नी शुक्रबार उनीहरुले हाउसमा बोलेको कुरा । ‘कागजमा लेखेर मात्र हुन्छ ? एक ईन्च पनि जमिन फिर्ता गर्न सक्दैन नेपालले’ भनेर बोलेको अभिव्यक्ति के हो ? के त्यो दा*दागीरी होईन ?
भारतले हाम्रो भुमि मिचेर बाटो बनाउँदा तापाँईको भुमि मिचेर हामीले बाटो बनाउँदै छौं भनेर हामीलाई सोध्यो ? हाम्रो सरकारलाई पत्र पठायो ? अनि हामीले आफ्नो भुमिलाई आफ्नो नक्सामा पार्नको लागी भारतलाई सोधेर नक्सा सार्वजनिक गर्नु पर्ने रे । यस्तो प्रकारको अभिव्यक्ति त्यो पनि संसद भित्रै के यो दा*दागीरी हैन ?
नेपालको संसदमा भारतको राष्ट्रिय भाषालाई प्राथमिकता दिएर हिन्दी भाषामा बोल्छन् को यो दा*दागीरी हैन ? संविधान संशोधनको प्रस्तावको विरुद्धमा बोल्छन् के यस्लाई दा*दागीरी भनिदैंन ? यो विषयमा मैले औंला गनेर उनीहरुले मच्चाएको दा*दागीरिको बारेमा भनि रहनु भन्दा पनि, देश विदेशमा बसेर मेरो देशको स्वाभिमानलाई कुल्चदै भारतीय चेलीहरुले बोलेको अभिव्यक्ति सुन्ने र देख्नेहरु आम नेपाली जनतालाई नै सबै थाहा छ ।
म त खुलेरै भन्छु यिनीहरु आफ्नो माईति देशबाट परिचालित व्यक्तिहरु हुन् । त्यसैले माईती देशको आडमा यिनीहरुले नेपालको संसद जस्तो गरिमामय ठाउँमा दा*दागीरी मच्चाई रहेका छन् ।
तपाँई जस्तै सांसदहरु धेरै नै छन् । तर तपाँई पहिलो सांसद हो जस्ले, संसदबाटै भारतलाई नै खुलेआम, आफुले पठाएको चेलीहरुलाई दा*दागीरी मच्चाउनको लागी प्रोत्साहान नगर्न च्यालेन्ज गर्नु भयो नि ? यो आँट र साहास कसरी आयो तपाँईलाई ?
म मेरो देश नेपालको भुमी पुत्री हुँ । मेरो पुर्खाको रगत र पसिनाले सिंचिएको मेरो देशको माटोमा खेलेर, याहाँको माटोको बास्ना सुँघेर, यहीको माटोमा अन्न उब्जाएर, खाएर हुर्किएको म यस धर्तीको छोरी हुँ । म नेपाल आमाको काखमा जन्मिएर हुर्किएकी चेली हुँ । म आफ्नै विवेकले चल्ने स्वचालित व्यक्ति हुँ ।
म परिचालित होईन । त्यसैले ममा मेरो देशमा गिद्दे आँखा लगाउनहरुलाई खबरदारी गर्नकोलागी पर्याप्त आँट र साहास छ । मलाई कसैले प्रयोग गर्न सक्दैन । किनकी मेरो पुर्खाहरुलाई कसैले पनि हल्लाउन, चलाउन र प्रयोग गर्न सकेनन । म त्यस्तो पुर्खाको रगत हुँ । छिमेकी देशबाट बुहारी बनेर आउनेहरुले मेरो देशको स्वाधिनतामाथि धावा बोलि रहंदा अरुले त्यसको खबरदारी गर्छन् वा गर्दैनन् त्यो उहाँहरुकै विवेक र क्षमताको कुरा हो ।
तर अरुले गरेका छैनन् भनेर मैले पनि नगर्नु भनेको मेरो पुर्खाले जोगाई राखेको मेरो देशको सानलाई अपमान गर्नु हो । त्यसैले यदि कसैले पनि मेरो देश र मेरो देशको माटोमा गलत नजरले हेर्छ मात्रै भने पनि त्यसको गिद्दे आँखा निकाल्ने साहास र आँट दुवै कुरा छ ममा ।